Azo atao ve ny manome oatsa sy vokatra isan-karazany hafa - Poultry farming - 2019
Ny akoho dia mihinana sari-by sy ny fomba hanomezana azy tsara
Ny famatsian-tsoavaly dia fihetsika manan-danja amin'ny votoatiny, satria ny sakafo entina amin'ny vatan'ny vorona dia iray amin'ireo antony mahavoa ny vokatra.
Fantatra fa ny voankazo dia tokony ho sakafo maina ho an'ny akoho ao an-trano.
Hiresaka momba ny tombontsoa sy ny fanimbana ny zavamananaina avia amin'ny hena sy ireo vokatra hafa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ahoana no hanomezana oats ny akohokely
Fomba ahoana no hamaizana ny akoho voa
Ahoana ny fomba fitaterana varimbazaha
Inona koa no azon'ireo akoho?
Azo atao ve ny manome aviavim-boankazo
Tsy vitan'ny hoe manome oats, fa ilaina ihany koa: ity kolontsaina ity no fototry ny famatsiana karazan'oliva miaraka amin'ny vary. Manana vitaminina sy mineraly manankarena izy, izay ilaina ny akoho raha ilaina ny fivoarana, ny fitomboana ary ny vokatra. Ao amin'ny oka dia misy kôbhydrate ilaina, proteinina, ny menaka ary ny fibre. Ny karbôbidia, izay tompon'andraikitra amin'ny fametrahana angom-pahefana sy ny asan'ny vorona, ny ankamaroan'izany - 66 g Fat - 6-7 g. Ny proteinina, na proteinina, izay ampahany (16-17 g isaky ny 100 g ny vokatra), ilaina amin'ny fananganana mass ary ny fivoarana feno ny vorona.
Ny vidin'ny sakafo 100 grama aviavy dia 389 kcal.
Ilaina ho anao ny mianatra izay tokony hampidirina ao amin'ny fihinanan'ny akoho, toy ny hoe mamelona hain-trano, fomba hanomezana akoho amin'ny ririnina amin'ny famokarana atody.
Ny 100 g amin'io sotroina io dia ahitana:
Vitamins - vondrona B (1, 2, 5, 6, 9), PP;
makronutrients - potassium, calcium, magnesium, sodium, phosphorus;
singa marindrano - vy, manganese, varahina, zina;
amino acids - arginine, valine, histidine, leucine, lysine, tryptophan, alanine, glycine and others;
Asidra fetsy - Omega-3, Omega-6, palmitika, palmitoleic, oleic, lauric, linoleic ary ny hafa.
Ireo singa eo ambony ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fahasalamana avo lenta sy tsara. Araka ny hitanao, ny oata dia loharanon-tsakafo mahavelona. Na izany aza, dia tsy tokony homena tsy an-kijanona tsy an-kijanona ny vorona. Amin'ny fampidirana io voamadinika io ao amin'ny sakafo, dia ilaina ny fepetra, raha tsy izany dia tsy hitondra soa ho an'ny sakafo izany, fa ho an'ny fahasimbana.
Fantatrao ve? Ny mpahay siansa nandray anjara tamin'ny tetikasa iraisam-pirenena, vokatry ny fikarohana lehibe sy ny fampitahàna ny chromosomes sy ny taolam-paty, dia nanatsoaka fa ny razambeny akaiky indrindra amin'ny akoho dia dinôzôro, izany hoe mpamono ny lamandy avo indrindra.
Ny famokarana fambolena manan-karena avy amin'ny hain-trano dia manome azy karazana manan-danja maro:
fananganana sy fanamafisana ny rafitra immune;
anjara tsara amin'ny fananganana ny rafi-pitiliana;
manampy amin'ny fampivoarana haingana aorian'ny dity, fanentanana ny fitomboan'ny volom-borona;
hampitombo ny vokatra;
mameno ny vatana amin'ny vitaminina sy mineraly ilaina;
vokatra mahasoa eo amin'ny fitomboan'ny tanora.
Araka ny efa nolazainay, ny hain-trano ihany, izay nampidirina ao anaty sakafo, dia mahasoa ny vatan'ny vorona. Ny fampiasana tafahoatra azy, ny fananganana sakafo an-tsokosoko amin'ny iray amin'ireny sotroina ireny, na tsy mety manompo azy, dia manimba ny akoho. Raha tsy manaraka an'io fanolorana io ianao, dia tsy ho ela dia hahatsapa olana ara-pahasalamana ny aretina, indrindra fa ny aretina ao amin'ny rafitry ny muscle, ny famokarana ny atody, ny tsy fahampian-tsakafo, ny fivoarana sy ny fampandrosoana, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny olana hafa ao amin'ny tranombokin'ny gastrointestinal.
Zava-dehibe izany! Ny tantsaha sy ny veterinera poultry dia manome fahazoan-dàlana hamerana ny habetsaky ny ovy, izay manome azy ao anatin'ny 20% amin'ny sakafo tsy mihoatra.
Ny voka-dratsiny dia betsaka ny fibre, izay tsy dia mamokatra loatra ny rafi-pandaminana.
Ary ny tompon-jazavavy izay mora tratran'ny fadiranovana, dia tokony hampidirina am-boaloboka miaraka amin'ny akoho hena sy amin'ny doka kely. Ao anaty lay izay mihena be ny lanjany, mitombo be ny famokarana atody, mitombo ny olana amin'ny taolana, ary noho ny asa ambany ambany dia lasa mampijaly izy ireo.
Noho izany, ny tombontsoa na ny fahasimbana avy amin'ny fampidirana ity sakamalao ao amin'ny fihinanan'ny akoho ireto dia miankina amin'ny antony roa:
amin'ny habetsahany no hiditra ao amin'ny vatan'ny vorona;
ahoana no hanomezanao azy.
Ny zava-misy dia ny voankazo masaka miaraka amin'ny volo dia misy volo kokoa noho ny tsy voatsabo. Noho izany, tsara ny manome azy tsy misy kofehy - ka ny habetsaky ny fibre izay miditra amin'ny vatan'ny vorona dia ho efa ho ny 5% latsaka.
Tsara ihany koa ny manavaka amin'ny antsipiriany, manasitrana na manondraka ny ahitra alohan'ny hatory ao anaty tavin-drano.
Hanampy anao koa ny hahalalanao raha afaka manome mofo, siramamy, tongolo gasy, hena sy ny taolana ho an'ny akohokely, ary hianatra ny fomba hanosehana kankana ho an'ny akoho sy ny fomba hanomanana mash ho an'ny akoho mandritra ny ririnina sy ny fahavaratra.
Amin'ny fahavaratra, rehefa mandehandeha be ny akoho dia manamboatra ny habetsahan'ny oats fa tsy mihoatra ny 20% amin'ny sakafo. Izy io dia nomena manokana na mifangaro amin'ny serealy hafa sy karazan-tsakafo hafa, ohatra, miaraka amin'ny zana-katsaka, legioma. Ity kolontsaina saro-bidy ity dia tena manan-danja tokoa ho an'ny tanora zandriny - omena azy ireo in-droa isan-kerinandro amin'ny takelaka na amin'ny endrika anaty.
Zava-dehibe izany! Raha ny sakafo fihinan'ny vorona dia voankazo voaomana, izay ao anatin'ny 10-20% ny voankazo dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny renim-pianakaviana. Mampitombo ny famatsian-tsigara - tsy mihoatra ny 5%, tsy azo atao afa-tsy mandritra ny vanim-potoan'ny famoahana volom-borona.
Amin'ny ririnina dia tokony homena aviavy hividianana voankazo na aviavy ny vorona - toy izany dia tsaboina tsara kokoa ny siramamy azo avy amin'ny sigara. Ny karazana voankazo isankarazany isam-bolana isaky ny olona tsirairay dia 120 g, ary ny oats dia 30 g.
Zava-dehibe ny manome ity vokatra ity mandritra ny vanim-potoana molting na fampihenana ny famokarana atody.
Ao anaty fitoeran-tsakafo plastika, dia manamboatra akanjo voajanahary madio.
Mafana ny lamba.
Asio ny voany.
Fonony amin'ny lamba malemy.
Apetraho ao anaty toerana mafana miaraka amin'ny fahazavana tsara ilay fitoeran-drano.
Alohan'ny hitsinjarana ny tsimokaretina, ilaina araka ny ilaina, ny voa ambolena.
Taorian'ny fisehoan'ny fakany sy ny tifitra maitso dia manome akoho izy ireo.
Ny fomba mora kokoa amin'ny fanangonam-bokatra ho an'ny akoho any an-trano dia hita ao amin'ny lahatsary. -
Ampio sira kely (tsy mihoatra ny 5 g).
Hanondrahana ranon-tsakafo amin'ny hain-trano.
Atsofohy mandritra ny 10 minitra izany.
Rano ny rano.
Voa maina ny vary.
Ny vokatra voamaina irery dia tsy afaka manome izay zavatra ilain'ny vatan'ny akoho, ka ny vokatra hafa dia tokony ho eo amin'ny sakafo. Ireto ambany ireto ny fomba mety hampidirana ny sasany amin'izy ireo.
Zava-dehibe izany! Alohan'ny hampidirana ny vokatra vaovao amin'ny vazivazy, ny fampitahana sy ny fampahalalana momba ny tombontsoa sy ny fahasimbana amin'ny vatana dia tokony hianatra amin'ny an-tsipiriany. Ireo angon-drakitra ireo dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny sakafo menamena, izay hanome azy ireo ny singa ilaina ary hameno izay zavatra ilain'ny vatany.
Ny vary orza dia zava-tsarobidy tsy azo ampiasaina amin'ny sakafo akoho, ary koa amin'ny biby fiompy sy ny sakafom-biby. Na izany aza, tokony lazaina fa ny akoho dia tsy tia azy noho ny firoborobon'ny ratra. Ka dia hihinana izy, ka hanome azy amin'ny voany, dia amin'ny vary. Ny varimbazaha, toy ny ôroka, dia manankarena proteinina (10 g), karbonhydrate (56 g), dite (2 g), fibre (14.5 g), vitamina, mineraly, amino ary asidra fetsy.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny vary orza amin'ny rajako dia 30% amin'ny sakafo isan'andro isan'andro. Mamelona ny tanora izy ireo, mialoha ny fanadiovana ary amin'ny antsipiriany.
Tsy voatery hanome izany ahitra izany mandritra ny vanim-potoana. Amin'ny ririnina, toy ny ôroka, ny vary orza dia alaina amin'ny endrika voajanahary.
Ny varimbazaha no sotroina maina izay atolotra ho an'ny biby fiompy: azo omena amin'ny 60-70% ho an'ny lanjany manontolo izany. Mahaliana fa ny isan-tsokajiny dia mihoatra noho ny voankazo hafa. Ity voankazo ity dia misy fiantraikany tsara amin'ny rafi-kery sy ny hormonina, ny fampiroboroboana ny rafitry ny musculoskeletal, ny fifampikasohana, ny fiarovana amin'ny aretina isan-karazany, ary ny famokarana ny atody.
Ny vorona iray izay mandany varimbazaha amin'ny habetsaky ampy dia tsy misy olana amin'ny tetikasa digestive, tsy misy olana amin'ny fiterahana.
Zava-dehibe izany! Ny alika maherin'ny 2 volana ho an'ny fiainana ara-dalàna, ny fandrosoana sy ny fitomboana dia tokony hodorana manodidina 290 kcal, 20% proteinina, 4% fibre. 2 hatramin'ny 4 volana - 260 kcal, 15% proteinina, 5% fibre. Rehefa afaka 5 volana - 270 kcal, 16% proteinina, 5% fibre.
Tahaka ny serealy efa natao, dia tsara ny manome vary amin'ny endrika voajanahary. Saingy mifanohitra amin'ny amboadia sy ny vary orza, ny voam-pihariana dia miorina tsara amin'ny trafitry ny gastric ao amin'ny akoho, ary manampy ireo vitaminina sy mineraly ny zavatra ao aminy.
Mpamboly biby fiompy maro no manome ny vary maitso. Izany no tena mahavelona, ​​avo kalorie (325 kcal isaky ny 100 g) ary vokatra mahasoa iray misy proteinina 10 g, 5 g ny tavy, 60 g ny karbôdrates ary 9 g ny fibre. Ny katsaka dia tafiditra ao anatin'ny fananganana ny jiolahy, mampitombo ny vokatra entin'ny hodi-biby, ny fivoarany ary ny fitomboany.
Ny voam-bary dia tokony homena ny akoho amin'ny endriny boribory, satria mety hiteraka adin-tany noho ny vidiny ara-tsakafo ambony izy io. Misy lisitry ny karazam-borona, izay mifandraika indrindra amin'ny làlana hena sy atody, izay tsy mifanentana ny vary.
Raha mikasika ny habetsaky ny katsaka, raha 120 isa ny soso-kevitra amin'ny fametrahana alikaola isan'andro, dia tokony ho 40 grama ny vary avy amin'io vola io
Fantatrao ve? Ny fikolokoloana akoho dia asa goavana, ary nanamora azy io, namorona fitaovana manokana izy ireo izay afaka mahatratra 200 layers anatin'ny 30 segondra, ary 60 minitra - 8 arivo. Ankoatra ny haingam-pandeha, ny tombony amin'ny fanangonana mekanika amin'ny akoho dia ny fampihenana ny ratra amin'ny tongotra sy ny elany.
Na hamahana ny akoho amin'ny mofo dia fanontaniana tsy mazava. Afaka miditra ao amin'ny sakafo amin'ny vorona izy, fa tsy ilay mijanona amin'ny latabatra iraisana na mametraka azy ao anaty kitapo mandritra ny andro maromaro ary miorim-paka. Ny sakafo maina, mainty mainty sy fofona dia ankatoavina amin'ny ankapobeny. Ny voalohany dia ratsy amin'ny famoahana, ny fivoahana ao amin'ny vavony. Ny mofo mainty dia misy sira sy masira betsaka, izay be dia be ny fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny akoho. Muffin koa dia misy fiantraikany ratsy amin'ny famoahana.
Na izany aza, indraindray ary amin'ny isa kely, ity vokatra ity dia mety ho mifangaro amin'ny ovy, voanio fofona, sira. Tokony omaly sy maina izany. Ny fanafody ao anatin'io firaiketam-po io dia hanampy amin'ny fanamafisana ny tsy fahampiana ary hampitombo ny vokatra amin'ny vorona. Ny fotoana tsara indrindra ho an'ny prikormki toy izany dia ny fararano-ririnina.
Mba hampitomboana ny vokatra ateraky ny akoho, dia azo omena trondro voakolokolo izy ireo, ao anatin'ny habaka goavana ahitana phosphorus sy calcium. Io fako io dia afaka manala ny vorona in-1-2 isan-kerinandro. Ampy ho 10 g isaky ny henany isan'andro. Ny fihinana matetika dia mety ho olana amin'ny fandevenana - fahaverezan'ny fandevenana, ny fikorontanana. Ho an'ny sakafo dia mety ho toy ny trondro sy trondro tsy misy fandaniam-bola izay tsy maintsy arahina tsara. Ilaina ihany koa ny manome sakafo ara-trondro: alaina maimaim-poana amin'ny 3-12% ny habetsaky ny sakafo. Ho an'ny sanda tsirairay dia tokony ho 1 sotro kely. Ny lafarina mifangaro amin'ny sakafo na mash.
Zava-dehibe izany! Tsy azo atao ny mamelona ny akoho miaraka amin'ny trondro sira. Ny sira be loatra dia miteraka fanafody lehibe amin'ny vorona, izay matetika no maty.
Ny menaka dia omena amin'ny akoho kely fotsiny, satria rehefa avy fitsaboana amin'ny hafanana, dia mamela ny vorona ny solanine manimba, manimba ny vorona. Azo lazaina fa mihinana an-tsokosoko an'io vokatra io ny havokavoka - voaaro tanteraka amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinalina izy ary mety amin'ny famonoana akoho 15-20 andro.
Isaky ny andro dia misy olona iray azo sakafon'ny voatoto 100 litatra. Ampiana amin'ny mash, ary koa miaraka amin'ny vokatra hafa.
Araka ny fantatrao, mila akoholahy ny akoho, anisan'izany ny legioma. Azo ambolena amin'ny akoho ireo bibikely, saingy amin'ny fampitandremana sy amin'ny dingan-danja. Ny voka-dratsy ateraky ny legioma dia afaka mamaly sangisangy miaraka amin'ny vorona ary miteraka aretim-be, izay tsy maintsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fepetra ankapobeny ny famokarana vorona sy ny atody.
Ankoatr'izay, ny ravina dia afaka manala ny cloaca amin'ny vorona, ary izany dia manosika ny fanosehana amin'ny mpanentana azy. Etsy andamin'izany dia mitombo ny herisetra eo amin'ny henan'ny mponina.
Ny tsara indrindra amin'ny fikarakarana akoho dia ny karazana bibidia. Azo omena maitso izy io ary araraka amin'ny torotoro. Ny dosie nomeny dia 30-50 g isan'andro isaky ny olona.
Ity vokatra ity dia ampiasaina betsaka amin'ny fiompiana vorona, satria misy proteinina be dia be izany. Na izany aza, manoro hevitra ny manam-pahaizana handao ity voam-bary ity noho ny antony mahatonga izany ho voan'ny aretim-pananahana.
Be dia be dia be ny voan'ny tsiranoka ao amin'ny voankazo voankazo voaangona, izay miditra ao an-kibo, mihovotrovotra ary tsy mihinana. Tao anaty vitsy kely ary indraindray dia navela hiditra tao anaty voankazo voaangom-bokatra, izay voaangona tsy lasa 3 volana lasa izay.
Azo alaina amin'ny tsy fisian'ny fitaovana hafa amin'ny ririnina mba hanomezana izany vokatra izany amin'ny 8% amin'ny volan'ny voankazo manontolo. Tsy voatery ny hanome sakafo tanora ho an'ny tanora. Noho izany, ny oats dia singa manan-danja amin'ny fikarakarana sakafo ara-dalàna sy voalanjalanja eo amin'ny tohatra. Manana tombontsoa maro izy io, toy ny: fiantraikany tsara eo amin'ny rafi-pandaminana, ny fananganana ny taolam-paty, ny fanentanana ny fitomboan'ny volony, ny fitomboan'ny famokarana atody.
Na izany aza, zava-dehibe ny manaja ny dosage amin'ity vokatra ity. Vita be loatra ny fandrahonana ny fahasimban'ny fahasalaman'ny renirano. Ny menaka no fototry ny menaka fiompy, fa ny sakafo hafa amin'ny zavamaniry sy ny biby dia tokony hampidirina ao amin'ny sakafo. Ny habetsaky ny sakafo dia miankina amin'ny karazan-tsakafo, ny taonany, ny vanim-potoana, ny toetrandro.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny akoho dia mihinana sari-by sy ny fomba hanomezana azy tsara